Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka dagan Xagardheere oo cambaareeyay fal-dambiyeedkii Nairobi
Shacabka dagan Xagardheere oo cambaareeyay fal-dambiyeedkii Nairobi
Maanta oo Axad ah taariikhduna ay ku beegnayd 2/2/14 waxaa xerada qoxootiga Xagardheere kadhacay shir aad ubalaadhan oo ay soo agaasimeen gudiga faraca Iftin ee kahowl gala xerada. shirkan oo ahaa shirkii caadiga ahaa ee faraca ayaa kusoo beegmay wakhti ay xamaasada faracyadu aad ukacsantahay iyadoo ay dadweynaha dagan xeryaha ka cadhoodeen falkii foosha xumaa ee lagu afduubay mas’uuliyiinta ee kadhacay magaalada Nairobi caasimada wadanka Kenya.
Shirka maanta oo wax yaabo badan kaga duwanaa shirarkii hore waxaa kasoo qayb galay dadwayne aad utiro badan oo xamaasadaysan iyadoo la arkayay haween ciyaalkoodii soo xanbaartay. Ugu horayn shirka ayaa lagu furay aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah oo uusoo jeediyay sheekh kamid ah culimada faraca waxuuna sheekh ku dheeraaday shirqoolada ay gaalada iyo munaa faqiintu umaleegaan dadyowga muslimka ah oo aan ahayn wax cusub wuxuuna sheekh dadkii kuwacyi galiyay in aysan falalka noocaas ihi qabjab kuridin umada muslimiinta ah.
Intaas kadib waxaa horay loogalay ajandayaashii kale ee shirka waxaana shirka maanta hadheeyay dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee kadhacay wadanka kinya ugu horayna mas’uuliyiintii shirka hagaysay waxay waxay dadwaynihii kahaqab tireen warbixinadii ugu danbeeyay ee gudaha wadanka Ogadenia iyo dibadiisaba waxayna dad waynihii madasha fadhiyay ka bogteen wax yaabo badan oo ay doonayeen in ay kahelaan xog kufilan. Dhanka kale dhamaan dadkii shirka kahadlay ayaa xubnaha kuboorinayay in lasii laba jibaaro halganka gude iyo dibadba halku dhaga dadwaynuhuna wuxuu ahaa FADHIGA HALAGA KACO.